Siyaasiyiin Reer Masar oo dowlada Morsi u soo jeediyey in Mucaaradka Itoobiya ku kacsan la taageero. Waa maxay Sababta? – idalenews.com
Madaxwaynaha Dalka Masar ayaa maanta shiriyay Hogaamiyaasha Diimaha, Hogaamiyaasha Mucaaradka, Siyaasiyiinta Dalka Iyo Aqoonyahanada Dalka Masar.
Kullankan ayaa wuxuu ku saabsanaa arrimaha Biya Xidheenka Itoobiya oo sahmayn xooggan ku leh, nolosha, dhaqaalaha Iyo Siyaasadda Dalka Masar. Madaxwaynaha Masar Maxamed Morsi iyo Hogaamiyaasha qaar ka mid ah ayaa lagu go,aansaday inay safar oogu baxaan dalka Itoobiya si ay oola soo kulmaan Madaxda Itoobiya.
Madaxwaynaha Masar Morsi ayaa sheegay in aysan aqbali doonaan wax nolosha Masar wax yeeli doona isla markaasna haddaladiisu ay ka mid ahaayeen Inta Dhibic Biyaha ah ay hoos isu dhinto ma aqbali doono. Hogaamiyaasha Ururadda Siyaasiyiinta Masar ayaa soo jeediyay in la hubeeyo Ururadda Mucaaradka ee Dowladda Itoobiya ku kacsan waxaana si cad u sheegay inay ku dhaqaaqayaan talaabadaasi.
Hogaamiyaasha ayaad moodaa inaysan la socon in TV laga soo daynayay. TV ayaa si cad waxaa looga sheegay in ay jirto Jabhadda ONLF, Jabhadda Oromadda, Jabhadda Axmaaradda, Jabhadda Tigreega oo dhamaan Xukumadda Itoobiya ku kacsan.
Lama cadayn karro in Ururadda Mucaaradka ahi aqbali doonaan Taageero ay ka helaan Masar. ONLF ayaan la ogayn inay aqbali doonto Iyo In kalle.
Melez Zenawi, Raysul Wasaarihii Dhintay ee Itoobiya ayaa sannadkii 2010 ku eedeyay Masar inay taagerto ONLF iyadoo warkaas ku noqday Masar mid ku cusub.
Madaxwaynihii Xilka iska casilay ee Masar Xusni Mubaarak ayaa gabi ahaanba eedeyntaas iska fogeeyay.
EEG WAKAALADDA AP OO WAX KA QORTAY ARRIMAHAN – Link